संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले कलंकको टिका लगाएः प्रचण्ड - Pokhara News
संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले कलंकको टिका लगाएः प्रचण्ड
पोखरा न्यूज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समुहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कलंकको टिका लगाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
बुधबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समुहको काठमाण्डौ भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान विपरित जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ओली इतिहासमा नै कलंकित हुन पुगेको बताउनुभएको हो । पटक पटक पार्टी फुटाउने प्रयास असफल भएपछि ओलीले संसद विघटन गरेको आरोप प्रचण्डले लगाउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले आफनो निर्णयलाई राजनीतिक निर्णय भन्दै सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिदै आएको उल्लेख गर्दै ओलीकै ‘जोकरपन’को पछाडि लागेर निर्णय भए मुलुकमा ‘आँधीहुरी बतास’ आउने चेतावनी दिनुभयो । ओलीले पार्टीले काम गर्न नदिएर संसद विघटन गरेको भन्दै झुट बोलेर जनतामा भ्रम छर्ने र दिउँसै रात पार्ने काम गरेको आरोप प्रचण्डले लगाउनुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेश ल्याएर र नेकपा एमालेको पार्टी दर्ता गराउन लगाएर पार्टी फुटाउने प्रयास गरेका ओलीले संसद विघटन गरेर “घर मै आगो” लगाईदिएको दाबी गर्नुभयो । संसद विघटन गरेर ओलीले इतिहासमा नै कलंकको टिका लगाएको दाबी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “घरमै आगो लगाई दिनुभयो । संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने काम गर्नुभएको छ । उहाँले बाजी हार्नुभयो । उहाँले लडाई हार्नुभयो । जब उहाँले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो र संविधानमाथि आक्रमण गर्नुभयो । उहाँले लडाई हार्नुभयो । जतिबेला विदेशीको इसारामा फेरि एकचोटी नेपाल राष्ट्रको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने जमर्को गर्नुभयो । त्यसकारण मैले भनेको छु इतिहासमा अब केपी ओलीले कलंकको टिका लगाउनुभयो । यो मेटिदैन । ”
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई “पोलिटिकल जोकर”को संज्ञा दिनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो “नौटंकी प्रहसन भइरहेको देख्नुभएको छ । यो विक्षिप्त मानसिकताको उपज हो कि जस्तो लाग्छ । कहिलेकाही साथीहरु विक्षिप्त भएछन् कि भन्ने डर लाग्छ उनीहरुको तर्क सुन्दा । कहिलेकाही साथीहरु जोकरमा परिणत हुनुभएछ क्यारे जस्तो लाग्छ । पोलिटिकल जोकर । जोकर जस्तो लाग्छ । ४ सय ४१ जनाको केन्द्रीय समिति, सय जना जुटेर ११ सय जनाको केन्द्रीय समिति बनायौ भन्ने यो नौटंकी नभए के हो यो ? यो नेपालमा प्रहसन देखाउन खोजेको नभए के चाँहि हो यो ?”
केन्द्रीय समितिको दुई तिहाई वहुमतले मात्रै पार्टीको विधान संशोधन गर्न सक्ने विधानमा नै लेखिएको भन्दै उहाँले सय जनाले विधान संशोधन गरेर ओलीले नाटक गरेको आरोप लगाउनुभयो । पार्टीको विधान निर्वाचन आयोगमा नै दर्ता भएको र दुई तिहाई बहुमत विना विधान संशोधन कसैले गर्न नसक्ने र दलसम्बन्धी ऐनमा ५० प्लस केन्द्रीय समिति संख्या भएको नै आधिकारिक पार्टी हुने भएकाले आफुहरु नै आधिकारिक भएको दोहोर्याउनुभयो । सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगप्रति आफुहरुलाई भरोसा रहेको तर उनीहरु पनि ओलीको राजनीतिक जोकरपनको पछाडि लागे भने मुलुकमा ठूलो आँधी हुरी आउने चेतावनी दिनुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ढाँटछलका कुरा गर्न “दुध भात खाए” जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “बिहान ११ बजे बामदेव जीलाई बोलाउनुभएछ र अबको अध्यक्ष तपाई नै हो कमरेड । प्रधानमन्त्री नि अब तपाई नै हो । मैले अरु देखिन भन्नुभएछ । उही दिन १ बजे माधव कमरेडलाई बोलाएर तपाई नै अभिभावक हो हाम्रो । तपाई उभिदिन पर्यो । अब अध्यक्ष पनि तपाई नै हो । प्रधानमन्त्री पनि तपाई नै हो भन्नुभएछ । ४ बजे म गएको, मैले त एमाले भित्र नेता नपाएर तपाईलाई ल्याएको भन्नुभयो मलाई । कस्तो सकेको हो के ? सकेको देखेर ताजुब मान्छु के उहाँलाई त ढाडढुट गर्न दुध भात खाए जस्तो के ।”
विगतमा पनि आफुहरुलाई ढाँट्दै आएका ओलीले आफु भागेर अरुलाई भगौडा भन्ने गरको दाबी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “हामीलाई भगौडा भन्नुभएछ । लाजैमर्दो । ७२ प्रतिशत केन्द्रीय भगौडा अनि ३० प्रतिशत पनि नभएको त्यो रैथाने । आधिकारिक त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ त्यो केपी ओलीको दिमाग भन्दा बाहिर ? जहिले नि बैठक बस्नु पर्यो भनेर जाँदा जहिले पनि भाग्ने अनि उहाँ भगौडा नहुने ? बैठकबाट जहिले पनि भाग्ने । हामीले निर्णय अनुसार केन्द्रीय समिति बैठक बस्दा हामी चाँही भगौडा हुने ? ”
उहाँले ओलीमा लाज घिन हराएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “पछिल्लो बैठक केपी ओली समेतको सहमतिको केन्द्रीय समितिको बैठक हो । त्यो बैठक छोडेर विधान मिचेर, संविधान मिचेर, निर्ममतापुर्वक, बडो निरंकुश ढंगले तानाशाही रुपमा पार्टिलाई लात हानेर भाग्ने चाही भगौडा नहुने । अनि हामी निर्णय अनुसार बैठक बस्दा हामी भगौडा हुने । मान्छेमा अलिकति लाज घिन चाँही हुनु पर्छ के । मान्छेमा अलिअलि लाज नैतिक हुनुपर्छ नि । निर्रघिणी हुनुहुन्न क्या । हाम्रो केपी जी त निर्रघिणी । झुटो कुरालाई हो के हो के भन्या जस्तो पार्न सक्ने क्षमता चाही केपीमा रच । त्यो त हुदै आएको थियो । ”
दाहालले पार्टीले काम गर्न दिएन भनेर झुटो बोलेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको प्रमाण पेश गर्न चुनौति दिनुभयो । पार्टीले काम गर्न दिएन भनेर ओलीले दिउँसै रात पारेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “पार्टीले के को घेराबन्दी गर्यो ? उहाँले प्रमाण सहित भन्नु सक्नुहुन्छ ? पार्टीले सरकारबाट उहाँले गर्न खोजेको कुन काममा बाधा हाल्यो ? एउटा मात्रै प्रमाण दिनुहोस् । म केपी ओलीलाई चुनौति दिन चाहन्छु यो मञ्चबाट । एउटा प्रमाण । पार्टीको यो निर्णयले पार्टीका यी नेताहरुले मलाई यो काम गर्न खोज्दा दिएनन् भनेर एउटा प्रमाण पेश गर्न म चुनौति दिन चाहन्छु केपी ओलीलाई । बरु पार्टीले यसो गरौ भन्दा त्यो नगरीकन उल्टो उल्टो गर्या हुनाले बिग्रेको हो भनेर म स्पष्ट राख्न चाहन्छु । ”
कोरोना महामारी सुरु भएका बेला महामारीलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म संयन्त्र बनाउँ भन्दा आफ्नो सुझावलाई व्यंग्य गर्दै हिडेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार स्वंयम स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचारमा मुछिएको बताउनुभयो । अध्यक्ष दाहालले आफ्नै सहकर्मी साथीहरु कै विश्वास जित्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओली सबै कोणबाट अल्पमतमा पर्दै गएको बताउनुभयो । ओलीले अरुलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा एकपटक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने तर्क दाहालले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “आफू अल्पमतमा परेपछि देश भाडमा जाओस् भन्ने पनि नेता हुन्छ ? देश र सिस्टम प्रति जिम्मेवार हुनु पर्दैन ? पार्टीलाई विश्वासमा लिने जिम्मेवारी ओलीको होइन ? माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम संगै काम गरेपनि उनीहरुको विश्वास जित्न किन नसकेको ? एकचोटी ऐनाको अगाडि आफ्नो अनुहार राम्रोसंग हेर्न पर्दैन केपी ओलीले ? ”
अध्यक्ष दाहालले भारतको इसारामा संसद भंग गरेको हो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ । भारतीय गुप्तचरसंगको अपारदर्शी भेटघाट जनतामाझ छर्लङग भएको भन्दै उहाँले विगतमा ‘भारत र साथीहरुले मलाई प्रधानन्त्रीबाट हटाउन खोजे’ भन्ने प्रधानमन्त्रीले अहिले भारतले भनेर संसद भंग गर्नुभएको हो ? भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “अहिले त नाङै देखिएको छ नि । विदेशी शक्ति केन्द्र आएर उहाँलाई के के मन्तर सुनाए । उहाँले त्यो मन्तर सुन्नुभयो । अस्ति भर्रखरै तपाईहरुले हेर्नुभयो नि जी न्युजको इन्टरभ्यु । त्यो पनि नाटकै हो । नाटक हो भन्ने कुराको पटाक्षप आज भईसक्यो । अब एभरेष्टको नाम फेर्ने रे । त्यही जी न्युजले । यो के नाटक देखिदैछ तपाई हामीले ? असारको स्थायी समितिको बैठक बस्दा त मलाई भारतले हटाउन खोजेको छ । मेरा साथीहरुले पनि हटाउन खोजेका छन् भन्नुहुन्थ्यो । हामीले हटाएनौ त्यतिबेला । भारतले भन्दैमा हटाउने हो र भनेर हटाएनौ नि त हामीले । अनि उहाँले अहिले पार्टी विभाजन गर्ने, संसद भंग गर्ने भारतले भनेर गर्या ? सारा जनताले देखे बुझे । यसलाई के भन्नुहुन्छ केपी जी ? मेरो प्रश्न तपाई यसलाई के भन्नुहुन्छ ? ”
आफ्नो निर्णय राजनीतिक भएको र राजनीतिक निर्णयलाई अदालतले मान्नुपर्छ भन्दै हिडेका ओलीमा निरंकुश र तानाशाही प्रवृति हावी हुदै गएको टिप्पणी दाहालले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “मेरो राजनीतिक निर्णय हो अदालतले मान्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले मैले भनेपछि मान्नुपर्छ । उहाँको सबै अभिव्यक्ति सर्वोच्च पनि केही होइन । निर्वाचन आयोग पनि केही होइन । संविधान पनि केही होइन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि केही होइन । पार्टी पनि केही होइन । बहुमत पनि केही होइन । म नै सबैथोक हो । आई एम त स्टेट । तानाशाहहरुले निरंकुशहरुले संसारभर भन्ने गरेको यही नै हो । ”
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली नै जनताको बहुदलीय जनवाद छोड्ने पहिलो व्यक्ति भएको दाबी गर्नुभयो । पार्टी एकताको समयमा राजनीतिक प्रतिवेदन छाप्न ओली तयार नभएको तथा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा सही गर्ने पहिलो व्यक्ति नै उहाँ भएको तर्क दाहालले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “जबज मदन भण्डारीको भुमिकालाई पनि स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लेख्ने हामीहरु नै हौ । जबज छोड्ने पहिलो व्यक्ति केपी ओली हो । तपाईहरु कोही भ्रममा नपर्नुहोला । अहिले भ्रम दिन खोजेका छन् उनीहरुले । पार्टी भनेको विचार र विधि हो । अहिले त जनताको बहुदलिय जनवाद भन्न खोज्नुहुन्छ , जनताको बहुदलिय जनवादलाई हटाएर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा सही गर्ने पहिलो व्यक्ति को ? केपी ओली । उहाँलाई अब यो बोल्ने कुनै बैचारिक, राजनीतिक र नैतिक अधिकार छैन भन्ने छ मेरो दाबी । उहाँ हो छोड्ने । ”
उहाँले ओली सुरु देखि नै नेपाल खेमालाई सिध्याउने र पछि आफुलाई सिध्याउने रणनीतिमा लागेको दाबी समेत गर्नुभयो । माधव कुमार नेपाल ओलीको गलत निर्णयको विरुद्ध सतिसाल भएर उभिएकाले आफुमा नेता नेपाल प्रति सम्मान बढेको बताउनुभयो । उहाँले ओलीको तानाशाही निर्णय विरुद्धको संघर्ष पार्टी भित्रको अन्र्तर संघर्ष पनि भएकाले विचार, विधि र समाजवादको आर्दश तर्फ अगाडि बढ्नेगरि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने बाटोमा एकजुट हुन कार्यकर्तालाई आव्हान गर्नुभयो । उहाँले आफै भित्रको अवसरवादका विरुद्ध संघर्ष गर्न तयार रहेमात्रै ओलीको अवसरवादी निर्णय विरुद्ध लड्न सकिने भएकाले त्यसका लागि तयार रहन पनि उहाँले सबैलाई निर्देशन दिनुभयो ।
आफ्नो सम्बोधन भरी प्रधानमन्त्रीको आलोचनामा खर्चेका दाहालले कमेडी शो गर्न नभई संविधान र लोकतन्त्र धरापमा परेकाले त्यसको रक्षाका लागि उपस्थित भएको भन्दै ओलीलाई व्यंग्य गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यसरी आक्रमणमा परेको छ । हामी उखान टुक्का भनेर कमेडी शो गर्न नि उपस्थित भएका छैनौ । हामी मानिसहरुलाई दिग्भ्रमति पार्ने , उद्धेलित पार्न पनि जुटेका होइनौ । हाम्रै पार्टीको , हामीले नै निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीबाट , हाम्रै पार्टीले हिजो अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको व्यक्तिबाट संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ र त्यो प्रहारको सामना गर्न हामी यहाँ उपस्थित भएका छौ । हामी ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि एम्बुसमा परेकाले र त्यसबाट बचाउनका लागि छलफलमा जुटेका हौ ।